Pabrika robot miady amin'ny afo - Mpanamboatra robot mpamono afo, mpamokatra
RXR-YC25000BD fanapoahana setroka afomanga ary robot scouting
Topimaso ny vokatra Toy ny karazana robot manokana, RXR-YC25000BD fipoahana setroka setroka afo dia manangana herinaratra bateria lithium ho toy ny famatsiana herinaratra, izay misy ny vatana robot, ny masinina setroka, ny fakantsary infrared ary ny terminal fanaraha-maso lavitra. Ny robot miady amin'ny afo dia voafehy lavitra amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso lavitra tsy misy tariby. Izy io dia afaka mitana ny asan'ny setroka sy vovoka, taratra hafanana, fanasana setroka ary entona fandrehitra amin'ny ady amin'ny afo sy famonjena, izay misy dikany lehibe ...
RXR-Q100D mandrehitra afo mandrehitra zavona rano
Famintinana ny rafitra Amin'ny maha karazana robot manokana azy, ny robot RXR-Q100D mpamono afo dia manangana loharanon-kery bateria lithium ho loharanom-pahefana robot, motera lasantsy ho loharano angovo azo, ary robot mamono afo fanaraha-maso lavitra amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso lavitra tsy misy tariby. Mitondra basy zavona etona avo setroka, zavona rano avo lenta dia misy fiasan'ny hatsiaka ambony ambany, asphyxiation, emulsification fiantraikany ary dilution ny loharanom-afo, ary koa ny fanakanana ny taratra hafanana sy ny fanasana setroka ...
RXR-MY120BD robot mpamono afo sy setroka
Famaritana momba ny vokatra RXR-MY120BD robot miady amin'ny afo sy mandany setroka dia karazana robot manokana. Mampiasa herinaratra bateria lithium izy ho loharanon-kery ary mampiasa fanaraha-maso lavitra tsy misy tariby mba hifehezana lavitra ny robot miady amin'ny afo sy ny setroka. Azo ampiasaina amin'ny orinasa petrochemical marobe izy io. Mitombo ny tonelina sy ny metro Ny solika sy gazy, famoahana entona misy poizina sy fipoahana, tonelina, fianjeran'ny metro ary loza hafa dia voan'ny loza. Famonoana afo sy setroka ...
RXR-MC200BD Robot fanaraha-maso ny ady amin'ny afo
Famaritana momba ny vokatra RXR-MC200BD fipoahana porofo mipoaka afo dia karazana robot manokana. Mampiasa herinaratra bateria lithium izy ho loharanon-kery ary mampiasa fanaraha-maso lavitra tsy misy tariby mba hifehezana lavitra ny robot famonoana afo. Ny robot dia miorina amin'ny vatana robot, tafondro rano be mikoriana, vilany / fitongonam-panaka misy infrared-proof, fanaraha-maso audio sy horonan-tsary, fanaraha-maso entona misy poizina sy manimba, ary tobin'ny fanaraha-maso lavitra. Azo ampiharina ...
RXR-MC120BD Robot fanaraha-maso ny ady amin'ny afo
Famaritana momba ny vokatra RXR-MC120BD robot mpanara-maso afo dia karazana robot manokana. Mampiasa herinaratra bateria lithium izy ho loharanon-kery ary mampiasa fanaraha-maso lavitra tsy misy tariby mba hifehezana lavitra ny famonoana afo sy ny setroka setroka. Azo ampiasaina amin'ny orinasa petrochemical marobe izy io. Mitombo ny tonelina sy ny metro Ny solika sy gazy, famoahana entona misy poizina sy fipoahana, tonelina, fianjeran'ny metro ary loza hafa dia voan'ny loza. Famonoana afo sy setroka taloha ...
RXR-MC80BGD robot mpamono afo sy scouting-proof
Fampidirana ny vokatra RXR-MC80BGD fanapoahana afo fanamafisana dia karazana robot manokana. Mampiasa herinaratra bateria lithium izy ho loharanon-kery ary mampiasa fanaraha-maso lavitra tsy misy tariby mba hifehezana lavitra ny robot famonoana afo. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny orinasa petrochemical lehibe, tonelina, làlam-by, sns., Izay misy solika sy gazy mihombo, famoahana entona misy poizina sy fipoahana, tonelina, fianjeran'ny metro ary loza hafa. Fitaovana manokana hanavotana ny s ...
2-S RXR-MC80BD robot mpamono afo sy scouting-proof
Topimaso RXR-MC80BD Fanaporoahana afo sy scouting robot dia namboarina ary voamarina amin'ny famonoana afo sy fanaraha-maso ny tontolo iainana mipoaka, toy ny fanadiovana petrochemical, fitehirizana solika sy solika ary fanamboarana simika, fitehirizana, toerana fitaterana sns. manampy amin'ny fanatsarana ny fiarovana ny famonjena ary ny fampihenana ireo maty ao amin'ny misiona. Endri-javatra 1. ★ voamarina ny fipoahana; IP67 & IP68 2. ★ Araraoty ny fandeferana amin'ny hafanana, ny mahazaka vita amin'ny afo ary ny rongony vita amin'ny vy ...
RXR-MC40BD Famonoana afo-fanamafisana Mediam-pandrosoana fanitarana sy scouting robot 80D-3
Famerenana ny vokatra RXR-MC40BD fipoahana porofo mipoaka afo dia karazana robot manokana. Mampiasa herinaratra bateria lithium izy ho loharanon-kery ary mampiasa fanaraha-maso lavitra tsy misy tariby mba hifehezana lavitra ny robot famonoana afo. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny orinasa petrochemical lehibe, tonelina, làlam-by, sns., Izay misy solika sy gazy mihombo, famoahana entona misy poizina sy fipoahana, tonelina, fianjeran'ny metro ary loza hafa. Fitaovana manokana hanavotana eo amin'ny sehatry ny ...
RXR-MC4BD Fipoahana porofo mipoaka miady amin'ny robot mpamono afo multiplex avo
Famaritana momba ny vokatra RXR-MC4BD porofo mipoaka afo miady amin'ny famonoana afo manaparitaka afo dia karazana robot manokana. Mampiasa herinaratra bateria lithium izy ho loharanon-kery ary mampiasa fanaraha-maso lavitra tsy misy tariby mba hifehezana lavitra ny robot mpamono afo. Ity vokatra ity dia azo ampiharina amin'ny akora simika mampidi-doza marobe, tranobe varotra midadasika, ozinina, orinasa ara-barotra, toeram-pitrandrahana, tonelina, metro, trano fitehirizana entana, hangar, sambo ary famonjena hafa amin'ny lozam-pifamoivoizana. Ny pr ...
FAMPIDIRANA PRODUKA Amin'ny maha karazana robot manokana azy, ny robot famonoana afo RXR-M80D dia mampiasa herinaratra bateria lithium ho toy ny famatsiana herinaratra ary mampiasa fanaraha-maso tsy misy tariby mba hifehezana ny robot famonoana afo. Azo ampiasaina ao, robot mamono afo dia mitana andraikitra lehibe amin'ny famonjena sy famonjena, indrindra hanoloana ny mpamono afo amin'ny fitaovana manokana mpamonjy afo na setroka afo. Sehatra fampiharana orinasa lehibe petrochemical, tunnel ary mpamonjy voina mpamonjy voina ambanin'ny tany amin'ny ...
RXR-M 30D miady amin'ny robot famonoana afo vovoka maina
Topimaso ny vokatra RXR-M 30D afo miady amin'ny vovo-jiro maina mamono robot ho toy ny vovoka famonoana afo toy ny vovoka maina jet na vovoka simenitra, mampiasa herinaratra bateria lithium ho toy ny famatsiana herinaratra, amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso lavitra tsy misy tariby mba hifehezana ny robot vovoka hatramin'ny ela elanelana. Afaka mifandray amin'ny kamio vovoka sy vovo-tsifotra hamonoana afo. Azo ampiasaina amin'ny orinasa petrochemical lehibe, tionelina, làlam-by ary fitomboana hafa, entona solika, famoahana entona a ...
RXR-C12BD robot fanaraha-maso afo
Famaritana momba ny vokatra RXR-C12BD robot fanaraha-maso afo dia karazana robot manokana. Mampiasa herinaratra bateria lithium izy ho loharanon-kery ary mampiasa fanaraha-maso tsy misy tariby mba hifehezana lavitra ny robot mpanara-maso afo. Azo ampiasaina amin'ny orinasa petrochemical lehibe, tonelina, làlam-by sns, izay mitombo ny solika, gazy, tafaporitsaka ny etona misy poizina sy ny fipoahana, ny tonelina, ny fianjeran'ny metro ary ny loza hafa izay voan'ny loza. Robot mamono afo p ...